The Institute for the Study and Treatment of Pain - MALAGASY Inona no atao hoe IMS? GunnIMS: Intramuscular tairina
MALAGASY Inona no atao hoe IMS? GunnIMS: Intramuscular tairina
Inona no atao hoe IMS? GunnIMS: Intramuscular tairina
MALAGASY / nadika FITENY
Ity pejy ity nadika haingana mampiasa Google Translate, ordinatera fandikana niteraka ezaka amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana vaovao lehibe ho an'ny vahoaka. Ampiasao ny mampilatsaka efajoro eo amin'ny ambony havanana ny pejy web misy ny mandika ny fanazavana ny fiteny tiany. Raha toa ka manana fanontaniana, dia mifandraisa antsika mba hangataka fanampiana. Masìna ianao, mamelà typographical misy fahadisoana, tena olombelona dia mpilatsaka an-tsitrapo mpandika teny be ankasitrahana ; )
Inona no atao hoe Gunn IMS? Gunn Intramuscular tairina
Supersensitivity sy ny hozatra shortening tsy azo niasa tamin'ny sy 'notapahin'ireo,' raha 'painkillers' sy pilina analgesic hafa ihany hanafina ny fanaintainana (matetika firy), ary mampirisika ny habetsahan'ny poizina, Tsy vitan'izay ny olana. Neuropathy ihany no mamaly ny torohevitra ara-batana hery.
Intramuscular tairina (IMS) dia rafitra ho tanteraka ny aretina sy ny fitsaboana ny fanaintainana myofascial syndromes (mitaiza fanaintainana toe-piainana izay mitranga eo amin'ny rafitra musculoskeletal rehefa tsy misy famantarana mazava ny ratra na mamaivay). IMS dia mifototra amin'ny Western Fitsaboana Izy, ary manana fototra mafy amin'ny radiculopathic modely ny fanaintainana, izay tohanan'ny maro ankehitriny, manam-pahaizana any an-tsaha. Ary nisy novokarin'ny Dr. Gunn fony izy dokotera tao amin'ny Mpiasa Compensation Biraon'ny Kolombia Britanika tao an-70 ny, izay fanadihadiana ny maro be amin'ny fomba mistery mafy loha tranga taorian'ny fahadisoam-panantenana amin'ny tsy mahomby fombafomban azony ampiasaina malalaka. Ny fitsaboana, izay mampiasa tsindrona volamena fanjaitra, satria izy ireo no thinnest fitaovana misy izay natao tafiditra lalina ao anatin'ny hozatra sela, mikendry manokana naratra hozatra izay fifanarahana ka ho tonga nafohezina avy fahoriana.
IMS Miantehitra be amin'ny fandinihana lalina ara-batana ny marary iray mahay no manao azy, nampiofanina hamantatra ny famantarana ara-batana ny neuropathic fanaintainana. Io fandinihana ara-batana dia ilaina satria mitaiza fanaintainana matetika atidoha izay mifanohitra amin'ny ara-drafitra, ka noho izany, tsy hita maso ny lafo vidy X-taratra, MRI fitsapana, fa taolanao sy CT notarafina. Ny tsy manaiky izao famantarana izao no vokany eo amin'ny tsy marina aretina, ary dia toy izany, ny mahantra hanombohana ny fitsaboana ara-batana.
Ny fitsaboana Tafiditra needling maina ny faritra voakasika ny vatana raha tsy misy mampiditra misy harena. Ny fanjaitra toerana dia mety ho amin'ny ivon'ny Taut, Sady tiana hozatra fatorana, na dia afaka ny ho akaikin'ny hazondamosiko izay kozatra fakany ny mety ho lasa tezitra sy supersensitive. Fidirana ara-dalàna ny hozatra dia hanala; na izany aza, dia fohy, supersensitive hozatra dia 'tanan'ny' ny fanjaitra Inona no azo lazaina ho toy ny cramping fihetseham-po. Ny vokany dia avo telo heny. Iray, dia mihinjitra receptor ao amin'ny hozatra no mandrisika, mamokatra amin'ny endriky ny fialam-boly (nanalavana). Roa, ny fanjaitra kely ihany koa ny mahatonga ny ratra izay Misarika ny ra ho any amin'ny faritra, miteraka ny fanasitranana ara-boajanahary dingana. Telo, ny fitsaboana dia miteraka ny herinaratra ao amin'ny hozatra mety mba hanao ny asa ara-dalàna indray kozatra. Ny fanjaitra ampiasaina amin'ny IMS, amin'ny alalan'ny fandrisihana hozatra tanatin, lasa voafaritra tsara indrindra sy tsy manam-paharoa fitaovana ho an'ny aretina ny Neuropathic Muscle Pain.
Ny tanjon'ny fitsaboana dia ny hamotsotra hozatra shortening, izay mamotsitra eo ary tiako ny kozatra. Supersensitive faritra azo desensitized, ary ny fihoaram- fohy maharitra hozatra azo navoaka. IMS Tena mandaitra noho ny hanafahana fohy contracture hozatra eo ambany, amin 'izany miteraka fanaintainana amin'ny hozatra milina fitaomana. IMS, raha ny marina, mihevitra ny fototra neuropathic toe-javatra izay mahatonga ny fanaintainana. Rehefa nanao pahombiazana izy, IMS manana tahan'ny fahombiazana miavaka, araka ny voaporofo ny fanatsarana ny soritr'aretina sy ny famantarana, na dia ho an'ny mitaiza indray fanaintainana amin'ny faka famantarana.
IMS dia mitovy amin'ny fomba sasany ny tsindrona volamena; na izany aza, dia misy maro ny fahasamihafana lehibe. IMS mitaky fanadinana ara-pitsaboana sy ny aretina iray manam-pahalalana no manao azy amin'ny Anatomy, fanjaitra insertions dia asehon'ny famantarana sy ara-batana fa tsy araka ny predefined, tsy siantifika meridians, raha subjective ary ny tanjona dia matetika vokatry za-draharaha avy hatrany.
Keywords: intramuscular tairina, intramuscular, IMS, cgims, Gunn IMS, maina needling, tsindrona volamena, trigger Point, myofascial fanaintainana
Ny Ivontoerana ho an'ny Fandalinana sy fitsaboana ny fanaintainana (iSTOP)
HAHITA CGIMS no manao azy - IRAISAM-PIRENENA DIRECTORY